Zilungiselele, bafikile ... "Ngaphandle", nguAvi Loeb
Ngaphandle, ngu-Avi Loeb
Isihloko esipheleleyo sithi «Umphambukeli: Ubuntu kwisibonakaliso sokuqala sobomi obunengqiqo ngaphaya koMhlaba»Kwaye kuya kufuneka uyifunde ubuncinci kabini ukuze ucinge ngokubaluleka kwelo bango.
Emva kwamakhulu eenoveli, iimuvi, iziyobisi zengqondo kunye neemfihlo eziphambili ze-NASA, kubonakala ngathi ngoku, inqanawa ikwazile ukudlula apha. KUNYE mhlawumbi usibonile njengabaphosakeleyo kwisiqithi sethu ngaphandle kokuhlawula. Ke, umbuzo kukwazi ukuba bekufanelekile na ukuyeka okanye sele beguqukile phakathi kwethu ukuphelisa ukushiya bedanile bephethe imizobo kaGoya, idiski kaBunbury kunye noluhlu lweencwadi Stephen King njengawo nawuphi na umkhondo womntu oza kuhlaziywa.
Into kukuba ngala maxesha njengoko enjalo, le Oumuamua inokuba noxanduva lobhubhane kunye nezifo ezahlukahlukeneyo ezisirhangqileyo kungoku nje ukuba sigqibe ukufika (kumbindi weArizona kunjalo) xa ingezizo nepeyinti zabantu. Kwaye zezi zinto zenzeka ngoku kule ndawo zimbalwa ...
Ngo-Okthobha u-2017, oososayensi e-Haleakala Observatory eHawaii bafumanisa into ehamba phakathi kweenkwenkwezi isondela kufutshane noMhlaba. Yaqala yahlelwa njenge-comet, kodwa le hypothesis yalahlwa.
Uyabizwa Owumuamua, "Umthunywa" okanye "umhloli" ngesiHawaii, yagqitywa njenge-asteroid, nangona ubume bayo kunye nokuziphatha kwahluka kwezinye ii-asteroids kunye neenkwenkwezi kwinkqubo yethu yelanga. Okukhona oososayensi beyijongile, kubonakala ngathi ngumfokazi kubo. Nini UAvi Loeb, UNjingalwazi we-Astronomy eHarvard, wacebisa ukuba UOumuamua ibubungqina bobomi obungaphandle komhlaba kunye netekhnoloji emajukujukwini, ikhuphe eyona nto ingoyena mpikiswano ubalulekileyo kwezesayensi kumashumi eminyaka.
Kule ncwadi, uLoeb uveza ithiyori yakhe kuluntu ngokubanzi okokuqala kwaye usinike uhambo olunomdla kwindalo iphela ukusuka kwimvelaphi yexesha, indawo kunye nobomi.
Ngoku ungathenga uMphambukeli, ngu-Avi Loeb, apha:
Iilebula UAvi Loeb, Iincwadi zesayensi